၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းမှ ဝင်ငွေ ဒေါ်လာ ၆၀၀ ဘီလီယံ နီးပါး ရရှိမည်ဟု ကျွမ်းကျင်သူပြော - Xinhua News Agency
ရှန်ဟိုင်း ၊ ဇန်နဝါရီ ၃ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းသည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် ဝင်ငွေ တရုတ်ယွမ် ၃.၈၁ ထရီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၉၈ ဘီလီယံခန့်) ရရှိရန် မျှော်လင့်ထားကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းအကယ်ဒမီဥက္ကဌ Dai Bin က ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်တွင် ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်သည်။၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် ခရီးစဉ်စုစုပေါင်း ၃.၉၈ ဘီလီယံရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းထားရာ ယင်းမှာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် သွားလာခဲ့သော ခရီးစဉ်အရေအတွက်၏ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် မမျှော်လင့်ဘဲ ရုတ်တရက်ပြန်လည် နလံထူခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းခရီးစဉ်အရေအတွက်သည် ၃.၄၃ ဘီလီယံရှိခဲ့ရာ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ကထက် ၁၉ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်ခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံ၏ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ပြည်တွင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းဝင်ငွေသည် ယွမ် ၃.၀၂ ထရီလီယံထိရှိခဲ့ရာ နှစ်အလိုက်တိုးတက်မှု ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းထိ ရှိခဲ့သည်။
ခရီးသွားလုပ်ငန်းပြန်လည်နလံထူရေး အဓိကမောင်းနှင်အား နှစ်ခုမှာ မြို့ပြနေပြည်သူများ၏ အားလပ်ရက် ခရီးထွက် အနားယူခြင်း နှင့် ကျေးလက်နေပြည်သူများ၏ သဘာဝရှုခင်အလှ သွားလာခံစားခြင်းတို့ဖြစ်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းအကယ်ဒမီဥက္ကဌ က မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ဒေသခံများ အပန်းဖြေအနားယူခြင်း လှုပ်ရှားမှုအစီအစဉ်များ ၊ ရက်တိုအပန်းဖြေခရီးထွက်ခြင်းများ ၊ ကိုယ်တိုင်သွားလိုရာသွားသည့်ခရီးစဉ်များ ၊ မိသားစုခရီးစဉ်များ နှင့် ယဉ်ကျေးမှုအတွေ့အကြုံခရီးစဉ်များသည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် ခရီးသွားလမ်းကြောင်းသစ်များဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟု ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။(Xinhua)
China’s domestic tourism revenue to near 600 bln USD in 2022: expert
SHANGHAI, Jan.2(Xinhua) — China’s domestic tourism revenue is expected to reach 3.81 trillion yuan (about 598 billion U.S. dollars) in 2022, Dai Bin, president of the China Tourism Academy, said on Saturday.
A total of 3.98 billion trips are expected to be made in 2022, nearly 70 percent of that in 2019.
The country’s tourism industry madeavolatile recovery in 2021. Dai estimated that the number of domestic trips in 2021 was 3.43 billion, up 19 percent from 2020, and China’s domestic tourism revenue in 2021 was 3.02 trillion yuan, up 35 percent year on year.
He noted that the two driving forces for the recovery of the tourism industry were the urbanites’ demand for leisure and the rural residents’ demand for sightseeing.
Local leisure activities, short-term trips, self-guiding trips, family trips and cultural-experience trips will become new trends in 2022, Dai said.
A staff member dressed as LinaBell waves to visitors at Shanghai Disney Resort in east China’s Shanghai, Nov. 3, 2021. (Xinhua)